'Daily Show' တွင်အိမ်ရှင် Trevor Noah ၌ Netflix ၌အထူးဟာသရှိသည် - ဟာသ
အသစ် 'Daily Show' ကိုအိမ်ရှင် Trevor နော Net သည် Netflix တွင်အထူးရပ်တည်သည်
Netflix မူရင်းရုပ်ရှင် Jadotville သည် Mark Strong ကိုထပ်မံထည့်သွင်းသည် ရက်သတ္တပတ်၏ Netflix TV Pick: 'The Walking Dead' ဟာသ က Bryce Olin လွန်ခဲ့သော6နှစ်က @bryceolin ကိုလိုက်နာပါ
တနင်္လာနေ့တွင်, Comedy Central stand-up လူရွှင်တော်ကြေညာခဲ့သည် နေ့စဉ်ပြ သတင်းထောက် Trevor နော of သည်အိမ်ရှင်အသစ်ဖြစ်လာလိမ့်မည် The Daily Show Jon Stewart ကဒီနှစ်အချိန်အတန်ကြာအနားယူတဲ့အခါ။
သိသာထင်ရှားတဲ့နော of သည်သူမ၏ ၀ တ်စုံ Stewart ကိုသွားစဉ်ဖြည့်ရန်ဖိနပ်အတော်များများရှိသည် TDS ပြီးခဲ့သည့် ၁၆ နှစ်တာကာလအတွက်၊ ဒါပေမယ့်ငါနော it လုပ်နိုင်တယ်ထင်တယ်။ တစ်ခုမှာ Jon Fox News Slayer Stewart ကိုဝင်မသွားရုံသာဖြစ်သည်။ အချိန်တန်သော်နောaသည်ကြီးမားသောအိမ်ရှင်တစ် ဦး ဖြစ်လိမ့်မည်၊ TDS ။
နော it ကသတ်လိုက်တယ်။
သင်ကလစ်ပုံမှနားလည်ခဲ့သည့်အတိုင်းနောa၌ထူးခြားသောနောက်ခံရှိသည်။ အရ The New York Times အသားအရောင်ခွဲခြားမှုကာလအတွင်းနော Noah သည်တောင်အာဖရိကတွင်ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ နော’s ၏ဖခင်သည်အဖြူရောင်ဖြစ်ပြီးသူ့အမေသည်အနက်ရောင်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုထိုအချိန်ကတရားမဝင်သောကြောင့်နော’s ၏ဖခင်သည်သူ၏မွေးစာရင်းတွင်ပင်စာရင်းမသွင်းနိုင်ခဲ့ပါ။
သူသည်အစပိုင်းတွင်အနည်းငယ်စိတ်မသက်မသာဖြစ်သော်လည်းသူ၏အသံနှင့်ရစ်သမ်ကိုရှာဖွေရန်အချိန်အနည်းငယ်လိုအပ်မည်ဖြစ်သော်လည်းနော the တွင်သရုပ်ဆောင်ရန်ကြယ်စွမ်းအားနှင့်စွမ်းရည်ရှိသည်။ ဒါကိုငါဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
နော’s ရဲ့ပထမဆုံးရပ်တည်မှုအထူးကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်၊ Trevor နော:: အာဖရိကန်အမေရိကန် Netflix တွင်ကြည့်ရှုရန်သင်ရရှိနိုင်သည်။
Trevor နော:: အာဖရိကန်အမေရိကန် 2013 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်, ဒါကြောင့်အမေရိက၌နထေိုငျနော’s ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးလအနည်းငယ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, အထူး Hilary!
သငျသညျ Trevor နော,, သူ့ဟာသ၏စတိုင်နှင့်သူ၏ရှုထောင့်အကြောင်းနည်းနည်းပိုလေ့လာသင်ယူရန်စိတ်ဝင်စားလျှင်, ငါအာဖရိကန်အမေရိကန် Netflix ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်။ ဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်၊ ပြီးတော့ခင်ဗျားကိုဘာတွေအကြောင်းပြောပြမယ် The Daily Show Trevor နော like နှင့်တူပါလိမ့်မယ်!
နောက်တစ်ခု:ယခုအချိန်တွင် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀
စစ်မှန်သောဘဝ၌ cesar နှင့်မွန်ချိန်းတွေ့ကြသည်
netflix 2017 အကောင်းဆုံးဟာသရုပ်ရှင်
အဆိုပါမွေးမြူရေးခြံရာသီ3နောက်တွဲယာဉ်
netflix အမျိုးသားရေး lampoon ခရစ်စမတ်အားလပ်ရက်
အဘယ်ကြောင့်ထောင်ဒဏ် frieda ဖြစ်ပါသည်
netflix အပေါ် Rick နှင့် morty ဖြစ်ခဲ့သည်